Mpanamboatra birao fanantonana rindrina ivelany PVC - Mpanamboatra sy orinasa Shina PVC rindrina ivelany ivelany
PVC rindrina ivelany Siding Start Bar dia Attachment amin'ny fanamboarana ny hazo fisaka voalohany eo amin'ny farany ambany.Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny endrik'izy io dia mifanandrify amin'ny tsipika fanondro, ny ankamaroany dia eo amin'ny fihaonan'ny taila seramika, vato kolontsaina, vato holatra, sns. ary hazo fisaka.
Loko Siding Mora Mametraka Foam Insulated Polyurethane Panels Exterior Panel Board
Panel fiarovana varavarana efitra fandroana Pvc ivelany Brick Siding
Pvc tontonana ho an'ny efitra fandroana amin'ny efitra fandroana Rindrina Cladding trano ivelan'ny trano Vinyl Siding
Ny rindrina ivelany amin'ny efitra fandroana ivelany sy ny rindrina PVC
PVC ivelany rindrina Siding fifandraisana baradia ampiasaina hampifandray tapa-kazo roa mihantona mitsivalana sy hanidy ny sisiny.
1.3mm hatevin'ny Rohs taratasy fanamarinana afo mahatohitra haingon-trano ivelany rindrina Pane
Henjana tsara, fanoherana ny fantsika ary fanoherana ny fiantraikany ivelany.Izy io dia azo tapahina amin'ny fomba tsy ara-dalàna araka ny fepetra takian'ny injeniera sy ny dingana, miondrika sy manova endrika, tsy ho mora vaky, tsy mora vaky, ary mahatohitra ny harafesina asidra sy ny etona rano, ny conductivity mafana ambany, ny lelafo mamono tena. Ny fenitra ambaratonga B1, dia afaka manemotra ny fiparitahan'ny afo.
Eoropeana Style Plastic Composite PVC Sarimihetsika mifono takelaka rindrina rindrina ho an'ny trano birao
Modely vaovao marika famantarana ara-tontolo iainana pvc rindrina rindrina manarona haingon-trano anatiny
PVC Exterior Wall Siding External Corner Strip dia ampiasaina amin'ny zoro ivelany amin'ny rindrina, toy ny sisin'ny rindrina roa mihantona amin'ity fihaonan-dalana ity.
Vokatra vaovao manavao ny tontolo iainana ara-tontolo iainana pvc rindrina ivelany tontonana
Bossyin 1.1mm hateviny plastika mitambatra PVC Sarimihetsika mifono Rindrina Rindrina vidin'ny fivarotana fivarotana